ဗိုင်းရပ်ကြောင့် hidden ဖြစ်သွားသော အချက်အား ..ပြန်လည်ရယူနည်း။။
ဗိုင်းရပ်ကြောင့် hidden ဖြစ်သွားတာပါ မပျောက်သွားပါဘူး ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိနေပါတယ်. စိတ်မပူပါနဲ့ . ပျောက်သွားတဲ့ဖိုင်တွေကို အောက်ကအတိုင်း ပြန်ဖော်ကြည့်လိုက်ပါ. အဲ့လိုပြန်ဖော်လို့ မရတဲ့အခါကျမှသာ ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ software နဲ့ ပြန်ယူလိုက်ပါ.
window7အတွက် ကတော့ search box ကနေ folder options လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေတဲ့ folder options ကို ဖွင့်လိုက်ပါ .
folder options >> view >> show hidden file, folder and driver ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
ပျောက်နေတာတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .
ဒုတိယနည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် . ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Download လုပ်ပြီး ဖိုင်ဖြေလိုက်ပါ. ရလာတဲ့ဖိုင်ထဲက explorer xp ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ. ကိုသိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်က ဘယ်ထဲမှာလဲ C:// ထဲမှာလား D:// ထဲမှာလား ဆိုတာကို ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ညာဖက်အခြမ်းမှာ hidden file တွေ ပေးလာပါလိမ့်မယ် . မပေါ်လာရင်တော့ အောက်က နည်းနဲ့မှ ရပါလိမ့်မယ်။
ပုံထဲကအတိုင်း ကို ပျောက်နေတဲ့ဖိုင်ကို နံပါတ်(၁)အတိုင်း select ပေးပြီး နံပါတ်(၂)အတိုင်း copy to folder ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ save လုပ်ဖို့ တောင်းပါလိမ့်မယ် အဲ့အချိန်မှာ ကိုက တစ်နေရာရာမှ save လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
antivirus အတွက်ကတော့ kaspersky internet security 2012 ကို တင်လိုက်ပါ.